အိုဆာကာအတွက်ကမ္ဘာ့ပထမဦးစွာ Geisha ကဖေးဖွင့်လှစ်, ဂျပန်သတင်းဖြန့်ချိ | Experience Japan
› ဘလော့ Myanmar › အိုဆာကာအတွက်ကမ္ဘာ့ပထမဦးစွာ Geisha ကဖေးဖွင့်လှစ်, ဂျပန်သတင်းဖြန့်ချိ
အိုဆာကာအတွက်ကမ္ဘာ့ပထမဦးစွာ Geisha ကဖေးဖွင့်လှစ်, ဂျပန်သတင်းဖြန့်ချိ
ဂျပန်, သြဂုတ် 22, 2017 / Maikoya / – Maikoya အိုဆာကာ, High-end ဂျပန်ယဉ်ကျေးမှုအတှေ့အကွုံမြားနေရာ, မကြာသေးမီကအိုဆာကာအတွက်ကမ္ဘာ့ပထမဦးဆုံး geisha ရေးရာကဖီးနှင့်စားသောက်ဆိုင်မိတ်ဆက်ပေးသည်။ ဤတွင်, ဧည့်သည်တစ်ဦးအလုပ်သင် geisha နှင့်အတူတစ်နှစ်မဆိုအချိန်တွေ့ဆုံရန်နှင့် chat လို့ရပါတယ်။ အဆိုပါအဆောက်အဦးတစ်ခုအမှန်တကယ် geisha အိမ်ကို Mid-1980 သည်အထိမတ်တပ်ရပ်တဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှုအပေါ်ဆောက်လုပ်ထားခဲ့သည်။ Shinmachi မှာတည်ရှိပါတယ်, Maikoya အိုဆာကာအနေနဲ့ဖျော်ဖြေရေးအချက်အချာအဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်နှင့်အဲဒိုကာလအတွင်းအများအပြား geisha အိမ်များခဲ့သည့်ဧရိယာ၏ဗဟိုမှာဖြစ်ပါတယ်။
Maikoya အိုဆာကာအများအပြားဟာယယဇ်ပူဇော်ရှိပါတယ်။ အဲဒီမှာထိုကဲ့သို့သောရွှေရေခဲမုန့်အဖြစ်အထူးထုတ်ကုန်နှင့်အတူတစ်ဦးကဖီးသည်နှင့်တစ်ဦးကြော့ရွှေကိုအလွှာ $ 300 ကုန်ကျကြောင်း Kobe မြို့အမဲသားသားညှပ်ပေါင်မုဖုံးလွှမ်းကြ၏။ ဤရွေ့ကားဟင်းလျာများ chat နှင့်အတူဓါတ်ပုံတွေကိုယူနိုင်ပါသည် whomvisitors တစ် geisha အားဖြင့်တာဝန်ထမ်းဆောင်နေကြသည်။ ထိုနေ့၏အချို့သောအချိန်များတွင်တိုက်ရိုက် koto သို့မဟုတ် shamisen စွမ်းဆောင်မှုရှိပါတယ်။ ဧည့်သည်များမှာလည်းအင်္ဂလိပ်စကားပြော geisha အားဖြင့် ceremonyled တစ်လက်ဖက်ရည်တွင်ပါဝင်ရန်ကြိုတင်မှာယူမှုများဖြစ်စေခြင်းငှါအခွင့်အလမ်းရှိသည်။
ဂျပန်သွားရောက်သူအများအပြားအဘို့, အရှိဆုံးတွေ့ရခဲသောအိပ်မက်များထဲမှတစ်ခုအမှန်တကယ် geisha တွေ့ဆုံလျက်ရှိ၏ ခေတ်သစ်နေ့ရက်ကို geishas များသောအားဖြင့်ကွန်ယက်ကိုပိတ်ထားခဲ့ကြပြီးမှသာအနည်းငယ်အလွန်ကံကောင်းသို့မဟုတ်အလွန်ကောင်းစွာ-connected ကလူကဒီလျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်ကမ္ဘာကြီး glimpsing ၏အခွင့်အလမ်းများရှိသည်။ Maikoya အိုဆာကာလူတန်းစားပေါင်းစုံ၏လူတွေကိုရန် geisha ၏သီးသန့်ကမ္ဘာကဖွင့်လှစ်ခြင်း, geisha အကြောင်းကိုဒါပေမယ့်လည်းအချိန် geishasexcel သောရိုးရာဂျပန်အနုပညာနှင့်လက်မှုပညာနှင့် ပတ်သက်. မသာဧည့်သည်များသင်ပေးဖို့ရည်ရွယ်သည်။ ဤလက်ဖက်ရည်အခမ်းအနား, ဂျပန်ကခုန်, လက်ရေးလှများနှင့်ဂျပန်ချက်ပြုတ်အတန်းများပါဝင်သည်။
geisha ၏ပကတိချက်နှင့်အဓိပ္ပါယ် “အနုပညာဖျော်ဖြေ ‘(: အနုပညာ, Sha: gei သဘင်) ဖြစ်ပါသည် Maiko ကဖေးစီမံခန့်ခွဲသူကိုMiho Hirata လက်ဖက်ရည်အခမ်းအနား”လို့ပြောပါတယ်။ တစ်ဦးက geisha ထိုကဲ့သို့သောအဖြစ်ရိုးရာဂျပန်အနုပညာနှင့်လက်မှုပညာမှာအကောင်းဖြစ်ရပါမည်ကဖေးကိုမှန်ကန်လျှင်လက်ဖက်ရည်အခမ်းအနားသည်,shamisen ကစားခြင်း, တစ်ကီမိုနိုပေါ်ချပြီးပန်းပွင့်အစီအစဉ်လုပ်နေနှင့် buyoo (ရိုးရာဂျပန်ကခုန်) ဖျော်ဖြေ။ ကျနော်တို့ geishas courtesans သိမ်းသွားလေ၏မဟုတ်ကမ္ဘာကြီးကိုသင်ပေးချင်တယ်။
အဆိုပါ Geisha “လူတိုင်းကမေးတယ်အဆိုပါမေးခွန်းဖြစ်ပါသည်။ ဤအအမှန်တကယ် geishas, ဒါမှမဟုတ် geisha ဝတ်ထားရုံမိန်းကလေးငယ်များကိုတက်စေပါသလား? Hirata ကဖြေဆိုရန်ခက်ခဲသည်ကပြောပါတယ်ပေမယ့်ဤလူသည်အခြားအလုပ်အကိုင်များရှိသည်သို့မဟုတ်သူတို့တစ်တွေ univeristy မှာလေ့လာနေရသည်။ သူတို့ကတစ်ဦး geisha ကဲ့သို့ဝတ်စားဆင်ယင်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင် Hirata “လူတိုင်း geisha သာကျိုတိုရှိထင်, ထိုအဝေးဆုံး, ။ သို့သော်သူတို့သမိုင်းကြောင်းထက်ပိုမို 10 မြို့များတွင်ကျင့်သုံး, တစ်ဦးချင်းစီမြို့အပြုအမူတစ်ခုကွဲပြားခြားနားသောကုဒ်ရှိခြင်းနှင့်အတူကျနော်တို့အိုဆာကာအခြေစိုက်, ကြှနျုပျတို့သေချာကြောင်းလုပ်နေကြတယ် ဝန်ထမ်းအဖွဲ့ဝင်များကဒီသင့်အမြဲကြောင်းစကားပြောဆိုမှုဆိုလိုတာကဂျပန်အနုပညာ၏အသိပညာ, geisha, sonkeigo ၏အသုံးပြုမှု, မှန်ကန်စွာဣတ္ဝတ်စုံများဝတ်ဆင်ရန်စွမ်းရည်နှင့် iki တစ်ခုအသိအမြင်၏သမိုင်းနှင့်အစဉ်အလာ၏အသိပညာ, ပါဝင်သည်။ အိုဆာကာအတွက် geisha ယဉ်ကျေးမှုနှင့်ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်ကြသည်နှင့်အတူအပြန်အလှန်ရန်။, လေးစားမှုသတိပညာ, ကြော့နဲ့အသိဉာဏ်ဖြစ်
မသာကျွန်ုပ်တို့၏အဆောက်အဦ။ Maikoya အိုဆာကာသွားရောက်ကြည့်ရှုဖို့အကောင်းဆုံးနေရာဖြစ်ပြီး, သူတို့လက်မှုပညာလေ့ကျင့်အဖြစ်အမှန်တကယ် geisha Maiko ကဖေးများနှင့်အများဆုံးခေတ်မီ geisha ယဉ်ကျေးမှုဿုံတော်ပါတယ်တစ်ခုအံ့သြဖွယ်လက်ဖက်ရည်အခမ်းအနားအခန်းတစ်ခန်းရှိပါတယ် ဒါကြောင့်လည်းလုပ်ဖို့တခြားအရာနှင့်တစ်ဦး upscaling ယဉ်ကျေးမှုလှုပ်ရှားမှုဗဟိုဌာနအဖြစ်ဆောင်ရွက်ပါသည်။
SOURCE မှ Maikoya
MaikoGeishaShinsaibashigionအိုဆာကာဂျပန်ဂျပန်လက်ဖက်ရည်အခမ်းအနားလက်ဖက်ရည်အခမ်းအနားကျိုတိုဂျပန်ယဉ်ကျေးမှုဂျပန်လက်ဖက်ရည်ယဉ်ကျေးမှုဂျပန်အစဉ်အလာgeisha မိန်းကလေး geisha တက်အောင်